Axmed Madoobe oo lagu soo dhoweeyay Xarunta Aqalka Sare - Jowhar Somali news Leader
Home News Axmed Madoobe oo lagu soo dhoweeyay Xarunta Aqalka Sare
Axmed Madoobe oo lagu soo dhoweeyay Xarunta Aqalka Sare
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) Madoobe ayaa gaaray Xarunta Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka, halkaasoo uu ku soo dhoweeyay Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Axmed Madoobe ayaa khudbad ka hor jeedin doona Aqalka Sare, isagoo su’aalo ay weydiin doonaan Senatarada Aqalka Sare.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhaq dhaqaaqiisa u horreeyay tan iyo markii uu Muqdisho yimid Talaadadii la soo dhaafay, inkastoo uu dhaq dhaqaaqiisa xadidnaa oo Hoygiisa iyo Madaxtooyada uu ka waday kulamada.
Wararka ayaa sheegayay in feejignaan amni uu ku jiray, kaddib markii Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka oo lagu magacaabo Daahir Amiin Jeesow uu ku baaqay in la xiro.
Dowladda Federaalka ayaa intii uu taagnaa khilaafkii doorashadii sanadkii hore waxay dhowr jeer isku dayday inay soo xirto, ayna go’doomiso, iyadoo ay u adeegsatay Ciidamo Kumaandoos Itoobiyaan ah oo qorsheynayay inay Axmed madoobe ka soo xiraan Kismaayo, inkastoo diyaaradii siday ciidamadaas loo diiday inay ka soo dagaan Garoonka Diyaaradaha Kismaayo.
Madaxweyne Farmaajo iyo Dowlad Goboleedyada oo u bilowday wajigii labaad shirka arrimaha doorashada
Dab ka kacay xarumo ganacsi ku yaalla magaalada Dhuusamareeb